Nyochaa na Spanish nke Vernee Thor, gam akporo 6.0 maka 100 euro | Gam akporosis
Taa, ya na Nyocha Vernee Thor na Spanish, Anyị na-alaghachi na nyocha nke ọnụ ahịa gam akporo ọhụrụ, nke anyị na-ekwusi ike na ihe na-agbanwe na ndị na-emepụta ọnụ ahịa Android nke sitere na Chinese, na nke ahụ bụ ma ọ bụrụ na m agwa gị na maka naanị 110 Euro ị ga-enweta Vernee Thor, A dum. Android 6.0, ya na ihuenyo IPS nwere nchebe nke ọgbọ nke atọ Gorilla Glass, 3 Gb nke RAM na ihe nrụpụta Octa Core dum nke nwere onye na-agụ mkpịsị aka, n'ezie ị kwenyeghị ya ma ọ bụ chee na nke a ga-abụ ogo nke ọnụ!
Ọ bụ ya mere m ji etinye vidiyo nke anyị ji malite nke a Vernee Thor nyochaa, ihe nkiri vidio na-aga n'ihu nke, ihe niile m chọrọ ime bụ igosi gị ọrụ dị egwu nke ọnụ dị ka a ga - asị na ị na - anwale ya n'onwe gị na onye mbụ. Ya mere ugbu a ị maara, ọ bụrụ na ịchọrọ ịhụ Vernee Thor na-arụ ọrụ, yana ịmara ihe ọma na ihe ọjọọ nke ọhụụ ọhụrụ a na-enye anyị, m na-akpọ gị ka ị gaa n'ihu na-agụ akwụkwọ a yana ịlele vidiyo m na-etinye na post, vidiyo na nyocha atụmatụ zuru ezu na ihu na vidiyo nke abụọ anyị na-anwale igwefoto ndị e wuru na Vernee Thor. Igwefoto ụfọdụ m nwere ike ịtụ anya na-atụ m n'anya nke ukwuu.
1 Nkọwapụta ọrụ Vernee Thor
2 Ihe kacha mma nke Vernee Thor
3 Ihe kacha njọ Vernee Thor
4 Nnwale igwefoto Vernee Thor
Nkọwapụta ọrụ Vernee Thor
Ihuenyo 5 "IPS LCD na HD mkpebi 1280 x 720 pikselụ, ọgbọ 3 nke Corning ozodimgba iko nchedo na arịrịọ njupụta nke 320 ngwa.
Nhazi Mediatek MT6753 64 Bit Octa isi 1.3 Ghz
Nchekwa n'ime 16 Gb na nkwado maka MicroSD ruo 128 Gb
Igwefoto na-aga n'ihu 13 mpx na autofocus Ikanam flash image stabilizer
Igwe n'ihu 5 mpx na HDR mode na ogbugbu ogbugba maka selfies
Njikọ Dual SIM Micro SIM - 2G: GSM 900/1900 / 2100MHz 3G: WCDMA 900 / 2100MHz 4G: FDD-LTE 800/1800/2100 / 2600MHz - Bluetooth 4.0 - GPs na aGPS - Redio FM - USB OTG - OTA -
Atụmatụ ndị ọzọ Mkpisiaka agụ na azụ nke ọnụ
Batrị 2800 mAh lithium polima
Akụkụ X x 142 70.3 7.9 mm
Ibu ibu 141 grams
Ahịa 106 euro
Ihe kacha mma nke Vernee Thor
Dị ka ndị kasị mma na nke ọhụrụ a Vernee ogwuE wezụga ọnụahịa mkpọsa a na-apụghị imeri emeri, ọtụtụ ihe pụtara ìhè n'etiti ndị ọzọ niile, ma ọ dịkarịa ala abụọ n'ime ha. Nke mbu su na-akpali akpali IPS ihuenyo na ọgbọ 3 Gorilla Glass nchedo nke ahụ na-enye anyị ụfọdụ ezigbo agba na ezigbo agba yana mmetụ nke enweghị ihe ọ bụla ga-emere anyaụfụ na njedebe nke ọnụahịa dị elu.
Nke abụọ iji gosipụta na nke a Vernee ogwu, n'adịghị ka ọtụtụ smartphones na ọnụahịa ọnụahịa a, bụ na o nwere ụfọdụ igwefoto edobere n'ime igwe, na igwefoto ya nke mpx 5 mpx nke ahaziri iche iji were ezigbo selfies, ma ọ bụ igwefoto azụ nke ihe ọ bụla na ihe ọ bụla na-erughị 13,3 mpx, na-enye anyị ezigbo mma n'ihe gbasara ịdebe foto, nke dị mma na gburugburu ọkụ ọkụ na-efunahụ ha ọtụtụ. nke dị mma dịka ọ na-emekarị n'ọtụtụ ekwentị, na gburugburu ya na-enwu gbaa ọ na-ewe foto ndị na-enweghị ihe ọ bụla ga-enwe anyaụfụ ọbụlagodi na ọnụ ọnụ atọ na-akwụ ụgwọ ya.
Emechaa ọ bụrụ na anyị nwere ọnụ gam akporo 6.0, na a ọma Ejiri igwe asatọ na 3 GB RAM nke ahụ na-enye gị arụmọrụ kachasị arụ ọrụ na ike ị na-agba ngwa gam akporo ọ bụla n'agbanyeghị agbanyeghị ọ dị arọ, anyị enweghị obi abụọ na-eche otu n'ime ihe ịtụnanya na afọ 2016 a echere anyị maka usoro ọhụụ ọhụrụ nke ọnụ site na mba nke nnukwu mgbidi China.
Iji mechie ihe oma nke Vernee Thor a na-enye anyị, anyị enweghị ike ịkwụsị ikwu banyere akara mkpisiaka agụ gụnyere na azụ ya, onye na - agụ akwụkwọ na ọ bụ ezie na na mbido ọ na - efu obere ihe iji jide ya, mgbe anyị jidere ntụpọ ọ na - arụ ọrụ nke ọma ma na - enye anyị ohere ị kpọghee ọdụ ahụ n'ụzọ zuru oke ma dịkwa ọsọ ọsọ naanị na nke abụọ ma ọ bụ nke abụọ na ọkara.
Igwefoto kachasị mma na nso ya
Ihe kacha njọ Vernee Thor
Ọ bụla gam akporo ọnụ na-etu ọnụ ịbụ, n'agbanyeghị oké ọnụ ọ pụrụ ịbụ, ma ọ bụrụ na anyị enyocha ya anyị ga-ahụ ihe ma ọ bụ na-adịghị mma akụkụ, na otú ọ ga-abụ ihe na-erughị, a Vernee Thor nwere ụfọdụ ihe nwere ike n'ezie ka mma a obere, ọ bụ ezie na nke a ga- n'ezie pụtara ikwu banyere mmụba na ọnụahịa nke ọnụ. Ya mere n'etiti akụkụ na-adịghị mma iji mee ka a mata Vernee Thor a na enwere m obi ụtọ ịnwale n'onwe m, anyị nwere ike ịkọwa akụkụ ndị a:
Ike ma ụda olu dị ala.
Azụ, ọ bụ ezie na ọ na-enye ya mmetụ aka, bụ akwụ akwụ na-adọta uzuzu, mkpịsị aka ya na unyi.
Igwe batrị agbakwunyere, nke na-enweghị aka nwere ike ịdaba na naanị 2800 mAh.
N’okwu nke mbụ, n’ihe gbasara ụda ahụ, ọ bụ ezie na ọ bụ ụda na-ada ike, nke bụ ihe anyị kwesịrị inwe ekele maka na n’ọgwụ ndị ọzọ nke ndị China na anyị nwalere ike adị ụkọ, nke mere na n’èzí anyị enweghị ike ịnụ ọkwa ma ọ bụ oku mbata, na Vernee Thor a, anyị agaghị echefu oku ma ọ bụ ọkwa ọ bụla na-abata, n'agbanyeghị Banyere ịdị mma ya, ọ na-ada ụda mkpọ.
Ọ bụrụ na anyị na-ekwu maka gị laghachi na ụdị roba siri ike nke ọnụ nke ụdị dị ka Motorola ma ọ bụ ọbụna na Nexus 5X, Ọ bụ ihe onwunwe ọ bụ ezie na ọ masịrị m nke ukwuu ebe ọ bụ na ọ na-enye ya mmetụ mmetụ aka na ụdị ọgbara ọhụrụ na ọmarịcha, ọ ga-amata na ọ bụ a ezigbo magnet iji weta ájá, mkpịsị aka mkpịsị aka na unyi.
Iji kwụsị ihe ọjọọ nke Vernee Thor a, anyị ga-ekwu maka batrị agbakwunyere 2800 mAh nke nyere m nnwere onwe nke ụbọchị niile iji ya yana njikọta niile enyere n'oge niile, nha ihu nge ihu na nke kachasị na ngụkọta nke atọ na nkeji iri na ise awa atọ na ọkara awa nke ihuenyo na. Agbanyeghị na ọnụọgụ ndị a adịghị njọ ma ọlị, enwere ike ịbawanye mma nke ukwuu site na ịhọrọ mgbakọ batrị nke ọtụtụ gam akporo ekwentị na-ejikarị arịgo ga-adị gburugburu 3000 ma ọ bụ ọbụna 3200 mAh, nke ga-ebuli ọnụahịa nke ọnụ.
Nnwale igwefoto Vernee Thor
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Nyocha » Nyochaa na Spanish nke Vernee Thor, ihe ijuanya nke oge maka etiti / ala dị ala gam akporo
Ndewo, ahụla m vidiyo gị ma hụ ya n'anya. Achọrọ m ịjụ gị ajụjụ. Kedu ka ijiri mepee mkpịsị aka gị na mkpịsị aka gị, na-enweghị paswọọdụ na-apụta mgbe e mesịrị. N'ihi na enweghị m ike. Ọ bụrụ na m wepụ okwuntughe, ọ na-ehichapụ mkpịsị aka m. Daalụ nke ukwuu.
Zaghachi Jesus Lopez
Ahụla m ntụnyere ahụ na-amasịkwa m Bluboo ka mma.
Otu ajụjụ, achọpụtara m na ọkwa ahụ adaghị arụ ọrụ, enwere ụzọ iji rụọ ọrụ ya?
Ihuenyo abụghị 5 ″. Ọ bụ 4,7 ″ kachasị.
E jiri ya tụnyere Galaxy s6.
Galaxy S6 11.2 mm ogologo ngosi. Vernee 10,7mm
Onye nwere ike inyere m aka ma tinye mgbawa ai ọ na-egosi na mgbawa mana ọ naghị agụrụ m ya kpamkpam n'ụlọ mmanya ahụghị m ihe zuru oke na akụkụ nke nhazi na ozi ma ọ bụrụ na ọ dị ka m na-arụ ọrụ na oku na enweghị m ike ịgbalite ya
Google choro ka ị nyere ya aka kpọọ gam akporo N
Hangouts agaghị efu dị ka Google